Turkiya oo ka soo taagan xiriirkii ay la lahayd Maraykanka – Kasmo Newspaper
Turkiya oo ka soo taagan xiriirkii ay la lahayd Maraykanka
Updated - February 13, 2018 12:35 pm GMT
London (Kasmo), Xiriirka Turkiya iyo Maraykanka ayaa heerkii ugu hooseeyay abid maraya, iyada oo Wasiirka Arrimaha Dibadda, Mevlut Cavusoglu,(Sawirka), maalintii Isniinta 12kii febraayo, si cad uga hadlay.
‘Heshiisku meel xun ayuu marayaa, waa in ama la hagaajiyaa amase gabi ahaantiiba la jaraa’ . Ereyadaas ayaa ka soo yeeray Cavusoglu maalmo yar ka hor booqashada Xoghayaha Dibadda Maraykanka, Rex Tillerson ku tagi doono Ankara, Khamiista 15ka iyo Jimcaha 16ka Febraayo.
Tillerson wuxuu la kulmi doonaa Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Madaxweyne Erdoqan qudhiisa, isla maalinta 15ka Febraayo, gabagabada kulanka Wasiirrada NATO ee Brussels, Xoghayaha Difaaca Jim Mattis wuxuu isagana arki doonaa dhiggiisa Turkiga Nurettin Canikli.
Kulammadaaas waxay qabsoomayaan xilli xiriirka Turkiya iyo Maraykanka meel xun ka sii hoobanayo, sababo badan dartood, oo ay ka mid tahay taageerada Washington siiso jabhadda YPG ee Kurdiga oo Ankara u haysato in ay tahay garabka hubaysan ee Xisbiga Shaqaalaha Kurdiga PKK oo Turkiya looga tixgaliyo Urur sharci darro ah.
Xiriirka adag ee Maraykanka kala dhexeeya Maleeshiyaadka Kurdiga ayaa mar kasta ahaa sababta xiisadda Washington iyo Ankara, waxayna sii xumaatay 20kii Jenaayo, markii Turkiya bilowday Hawlgalkii Arfin ee la magac baxay ‘Operation Olive branch’.
Ereyada Cavusoglu jeediyay 12kii Febraayo wuxuu ku sheegay in ‘waxa Turkiya ka dalbanayso Maraykanka qeexanyihiin isla markaana loo gudbiyay. Ma doonayno ballanqaadyo dambe, waxaan rabnaa tillaabooyin la taaban karo’.
Wasiirku wuxuu kol hore arrimahaas uga hadlay shir jaraa’id oo Istanbul ka dhacay 25kii Jenaayo, isaga oo ku boorriyay Maraykanka in ay bilaabaan sidii loo soo celin lahaa kalsoonidii 2da dal ka hor inta aan waxyaabaha istrateejiga ah laga hadlin.
Isla maalintaas, Ku-xigeenka Ra’iisal Wasaaraha Turkiya, Bekir Bozdag, wareysi uu siiyay idaacad gaar ah wuxuu Maraykanka kaga codsaday in ay joojiyaan taageerada ‘argagixisada’ haddii ay doonayaan in ayan Turkiya isku dhicin gudaha Suuriya.